ကောင​္း​စွာ​အသုံး​ျ​ပုန​ို​င​္ေ​သာ​အေ​ျ​ခ​အေ​န​ရှိ​သ​ည​့္ 2006 ေ​မာ​္​ဒ​ယ​္ အန​က​္ေ​ရာ​င​္ မာ​စီ​ဒီး ဘ​င​့္(ဇ) (MBE-280 Sedan)၊ တံခါး4ေ​ပါ​က​္၊ ဘယ​္ေ​မာ​င​္း ၊ ဂီ​ယာ ၆ ချ​က​္ (Manual) နှ​င​့္ ကီ​လို​မီ​တာ 126582 အသုံး​ျ​ပု​ထား​သ​ည​္။ ဝယ်ယူ​ရန်စိတ်ဝင်စား​ေ​သာ သံ​တ​မန်များ ၊ သံ​ရုံးများ ၊ ျ​မန်မာန​ိုင်ငံ​သားများ နှ​င​့္ လူ​မှု​အသ​င​္း​အဖွဲ.များ သ​ည​္ ဝယ်ယူန​ို​င​္ေ​သာ​ဈေး​နှု​န​္း​ကို အေ​မ​ရိ​က​န​္ေ​ဒ​ၚ​လာန​ွ​င​့္ေ​ဖ​ၚျ​ပ၍အိတ်ပိတ်ပီး အောက်ဖေါ်ျ​ပ​ပါ​လိပ်စာ​သို. မတ်လ ၃​၁​ရ​က​္ေ​န. ေ​နာက်ဆုံး​ထား၍ပေးပို.နိုင်ပါသည​္။
Mr. D.B. Bhati, Head of Chancery, Embassy of India, 545-547, Merchant Street, Yangon, (Tel. No. 243972/ 388412/ 391219)